Ukuphupha ngobusela Discover ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Ukuba uphawu "ubusela" lubonakala ephupheni, ayinyanzelekanga ukuba ibe malunga nokubiwa kwemali, isipaji okanye ezinye izinto eziphathekayo. Kodwa kunokuba yimicimbi yentliziyo kunye nezinye izinto.
Umphuphi kufuneka azibuze ngalo mqondiso, ukuba uye wayityeshela into ebomini bakhe okanye wayiphatha ngokungakhathali kumcimbi. Okokuqala, uphawu lwephupha "ubusela" luphawu lwesiphene esizibonakalisa kule fomu yangaphandle. Ke ngoko, kugxilwe kumbuzo wokuba yeyiphi indawo yobomi el mundo Ukuvuka kubonakaliswa ngokwahlukana kunye nelahleko kwaye ngoku kufuziselwa ephupheni ngokweba.
Apha ngezantsi uyakufumana uluhlu lweemeko ezahlukeneyo zamaphupha ezinokuvela malunga nokuphanga ngelixa ulele. Ukuqhubela phambili uya kufumana ulwazi ngakumbi malunga nophawu lwephupha 'ubusela'.
1 Uphawu lwephupha «ubusela»: awona maphupha aqhelekileyo malunga nesimboli
1.1 Ubusela kwiindonga zakho ezine - iphupha eliqhelekileyo!
1.2 Yintoni enokubiwa ekuphangweni kwephupha?
1.2.1 Iphupha lobusela bemoto
1.2.2 Amakhadi abiwe ephupheni, ahamba!
1.2.3 Iphupha lokuba igolide nezacholo
1.2.4 Xa iselfowuni ibiwe ephupheni
1.2.5 "Ubusela beebhegi": oku kunokuthetha ntoni kuhlalutyo lwamaphupha?
1.2.6 Kubiwe iimpahla ephupheni
1.3 Imali ebizayo ayisekho! Iphupha lokuba imali
1.3.1 Isipaji okanye isipaji simkile. Ukusuka ephupheni ukuya kwinyani?
1.3.2 Imali yam ibiwe: uhlalutyo lwamaphupha
1.3.3 Isela eliba imali kwilizwe lamaphupha.
1.3.4 Yabanjwa! Ukubanjwa ubambe imali yamaphupha akho
2 Uphawu lwephupha «ubusela» - ukutolikwa ngokubanzi
3 Uphawu lwephupha «ukuphanga» - ukutolikwa kwengqondo
4 Uphawu lwephupha «ukuphanga» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «ubusela»: awona maphupha aqhelekileyo malunga nesimboli
Ubusela kwiindonga zakho ezine - iphupha eliqhelekileyo!
Ukuqhekeza ekhaya kunokubonwa ephupheni njengophawu lokuphoxeka kwangoko. Umphuphi kusenokwenzeka ukuba abe nelishwa kwihlabathi lokuvuka. Ukuba ukuphanga kwenzeka endlini, oku kuhlala kubonisa uloyiko lokwenene lomntu oleleyo lokungakwazi ukwenza ngokweminqweno yakhe.
Yintoni enokubiwa ekuphangweni kwephupha?
Iphupha lobusela bemoto
Iphupha lokuba imoto linokutolikwa ngendlela yesicelo. Ebomini bokuvuka, umntu oleleyo kufanele ukuba akhathazeke malunga nento ekhoyo ngoku ebomini bakhe. Ukongeza, ukubiwa kwemoto ngokwayo kunokulumkisa ngengozi yokwenene. Ukuba ukubiwa kwebhayisikile kuqatshelwe ngelixa ulele, kunokwenzeka ukuba umntu ophuphayo akakhange athathe thuba lokuqhubela phambili.
Amakhadi abiwe ephupheni, ahamba!
Ngephupha lobusela bekhadi letyala, iphupha ongakwaziyo ukwenza kwihlabathi lokwenyani njengoko lihambelana neemfuno zakho liboniswa ikakhulu. Unokubacingela kakhulu abanye abantu. Ukuba ikhadi le-EC libiwe ngelixa ulele, le meko yephupha inokulumkisa ngeentshaba zokwenyani ezikufutshane.
Iphupha lokuba igolide nezacholo
Ubusela bejewel yamaphupha bunokubonwa njengophawu oluqinisekileyo ekutolikeni amaphupha kwaye ngaphezulu kwako konke kuthembisa ithamsanqa kunye nempumelelo kulowo uphuphayo. Nangona kunjalo, ukuba ubucwebe obugqwesileyo bebiwe ephupheni, umntu osephupheni unokuba buhlungu kakhulu. Ukubiwa kwegolide ngumntu oleleyo kuhlala kuzisa iindaba ezingathandekiyo zokuvusa ubomi, kunye nelishwa kumdlalo.
Xa iselfowuni ibiwe ephupheni
Ubusela beselfowuni ephupheni bunokubonwa njengophawu lokoyika ukuphupha kummandla wentlalo. Lowo uleleyo unokuba nexhala malunga negama lakhe elihle okanye ukuphulukana nesikhundla sakhe kwihlabathi elivukayo. Uloyiko lwakho lokuba lilolo lunokuvakaliswa nakweli phupha.
"Ubusela beebhegi": oku kunokuthetha ntoni kuhlalutyo lwamaphupha?
Ukuba isipaji okanye ibrifkheyisi ibiwe ephupheni, oku kungabonisa inkxalabo yokwenene yalowo uleleyo, omnye umntu ebomini bokuvuka angangena kwindawo yakhe yabucala kwaye athintele inkululeko yakhe yobuqu. Kwakhona, iphupha eloyikisayo lobusela besipaji linokubonisa ukuthintela iphupha ukusondela ebantwini okanye ukwakha ulwazi nabanye.
Kubiwe iimpahla ephupheni
Ukuba umphuphi ufumanisa ukuba iimpahla zakhe xa elele, kwiimeko ezininzi kufuneka aqonde ukuba uyoyika ukuphulukana nesazisi sakhe ngokwenyani. Unokuvezwa kwimpembelelo eyomeleleyo yangaphandle kubomi bokuvuka, okwenza ukuba kube nzima kuwe ukuba uphile kwimfuno kunye neemfuno zakho.
Imali ebizayo ayisekho! Iphupha lokuba imali
Isipaji okanye isipaji simkile. Ukusuka ephupheni ukuya kwinyani?
Ukuba ufumana ubusela besipaji sakho okanye ukurhoxiswa kwesipaji sakho ephupheni lakho, kuya kufuneka uqaphele uloyiko lwakho lokuphulukana nento ebalulekileyo kwihlabathi eliphaphileyo. Oku kunokuba kokubini sisithandwa kunye nokulahleka kwamandla. Ubusela besipaji okanye ubusela besipaji sinokubonisa uloyiko lokuphulukana neqabane ebomini bokuvuka.
Imali yam ibiwe: uhlalutyo lwamaphupha
Ubusela bemali bunokubonisa uloyiko lokwenyani lokunqongophala kwemali kwinqanaba lamaphupha okanye lumlumkise umntu ukuba ajongane nokuziphatha okukhulayo kwehlabathi. Ukuba umphuphi unesimo sengqondo sokugxininisa imali ebomini ebomini bokuvuka, ukuba imali ngelixa ulele kunokumkhuthaza ngakumbi ukuba akhathalele abantu ababalulekileyo kwaye angakhathaleli ipropathi yakhe kuphela. Ukuba umntu ufuna ukundiba imali kwihlabathi lamaphupha, kusenokubakho uloyiko lokwenyani lokuba akukho mali yaneleyo ebomini. Ukongeza, ukubiwa kwemali kunokubonisa isilumkiso kwaye ubuze indlela oziphethe ngayo kwilizwe labalindi.
Isela eliba imali kwilizwe lamaphupha.
Ukuba yayilisela elibe imali kulowo uphuphayo ephupheni, oku kungabonakalisa amandla acinezelweyo kunye nomnqweno wokuthandana. Nangona kunjalo, iimeko ngqo zephupha kufuneka zithathelwe ingqalelo. Ukutolika ngokuqinisekileyo liphupha apho umntu anokubamba umenzi wobubi. Ukuba isela liyabaleka, kunokubakho ukuphoxeka.
Yabanjwa! Ukubanjwa ubambe imali yamaphupha akho
Ukuba iphupha "lokubanjwa ubambe imali" livela xa ulele kwaye ungabanjwa ubiba imali, mhlawumbi kwibhokisi yedini, ungaphoswa ngamathuba abalulekileyo kwilizwe lokwenyani. Isizathu soku kukungaqiniseki kunye namathandabuzo ngawe.
Uphawu lwephupha «ubusela» - ukutolikwa ngokubanzi
Ukuba iphupha limalunga nobusela, lithetha malunga Yintlungu Ilahleko. Isimboli yephupha kufuneka ithathwe ngokoqobo. Ukuba ubusela benziwe ngumntu ongamaziyo, mhlawumbi yinxalenye yakhe apho umphuphi angazithembi khona.
Isigqibo sokutolikwa kulapho livela khona isela, ukuba lizama ntoni ukuba kwaye ngubani owenzayo.
Ukuba wena ngokwakho wenza ukuphanga uye webe kwilizwe lamaphupha, umphuphi unokukubambisa ngokwenyani. ukonakalisa buyela umva ngomzuzu wokugqibela. Oko kubonakala kukubi ekuqaleni kuvela ngethamsanqa. Ukuba omnye ubizwa ngokuba lisela, kunokubakho ityala lokunyelisa.
Ukuba wena ngokwakho ubona isela kwizenzo zolwaphulo-mthetho, kunokwenzeka ukuba bakho abantu kwindawo yamaphupha abanomona. Kukho umngcipheko okhulayo Kukhuthaziwe kuwa nge. Ukuba umntu utyhola umntu ngobusela ephupheni, lowo uleleyo kufuneka alumke angagwebi abanye ngokukhawuleza. Ngokuchasene noko, abantu abaphethwe ngokungenabulungisa banokumenzakalisa umntu ekubhekiswa kuye.
Ukuba uye waleqa wabamba isela ephupheni, ungafa kungekudala umnqweno izaliseka. Izinto eziluncedo ngaphezu kwabanye abantu zinokwenzeka; abo bakwaziyo ukuziqinisekisa bakwicala lokuphumelela.
Uphawu lwephupha «ukuphanga» - ukutolikwa kwengqondo
Ukusuka kwindawo yokujonga ukutolikwa kwengqondo kuxhomekeke ephupheni indlela yokuziphatha okungalunganga okuziva ngayo. Ke ngoko, uloyiko lokulahleka okanye ubuqhetseba lunokwahluka kakhulu kwaye kunokubangela ukungazithembi. Kule meko, iitalente zakho kunye nobuchule bakho bunokubuzwa kwaye ilahleko ibonakalise njenge Ukungalingani imeko yeemvakalelo iphela.
Ukuba abafazi baphupha ngokuphanga okanye ukuphanga, oku kunokuthetha ukuba bangathanda "ukuba" uluntu lwabo lwangoku. Nangona kunjalo, oku kusebenza kuphela kumaphupha amabhinqa aqukethe ezinye iisimboli ezixhasa le nkcazo. Amaqabane onwabileyo abonisa ubusela ukuba banexhala lokulahleka kwento okanye umntu obalulekileyo; oku kungabhekisa nakwiqabane.
Ukuba umqhekezi ungena endlwini ngexesha lephupha okanye isakhiwo siqwalaselwe, oku kubonisa uloyiko lokuba iphupha lingaphulukana nento ebalulekileyo. Ukuba imoto ibiwe, uphawu lwephupha lubonisa ukuba kukho into ekucingekileyo ilahlekile ifunyenwe.
Uphawu lwephupha «ukuphanga» - ukutolika kokomoya
Ukuthetha ngokwasemoyeni, ubusela ukubheja okungalunganga yamandla. Wonke umntu unamandla afumanekayo ekufuneka esetyenziswe ngobulumko nangokuchanekileyo. Ukukhafula kukwabizwa ngokuba bubusela kuba abuhambelani nemithetho yamandla.